Bulsho karaameysan waa bulsho awood leh. Guusha reer Norwey iyo waxa laga baran karo
Qoraalkan oo kooban waxaa markii hore laga soo saarey hiiraan.com- 13.04.2017
Gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan. Abaabulkii howsha aad buu markan u balaartey. Dad badan ayaa ka soo qeyb galey. Meelo badan ayay gaartey. Magacii markii hore ay howsha ku bilaamatey oo ahaa `Somali Forum`, waxaan u badalney `Jaaliyada Somalida Norwey`. Oo howshii waxey noqotey howl jaaliyadoo dhan isku keentey. Ganacsatayaasha, tagsiilayaasha, masaajidada, dhalinyarada, warbaahinada, aqoonyahanada, ururada kala gedisan ee bulshada, siyaasiyiinta, hormoodada bulshada – looma kala harin wada qabsiga howshaan.
Si ay howshu u kala socoto nidaam baa loo sameeyay, oo howlihii baa la kala qeybsadey. Koox walbaana howl ayaa mas`uul looga dhigey. Wax kastoo cusub oo la bilaabo, carqalado ayay la kulmaan. Dhibabkii aan la kulaney intaan howshan ku jirney, waxaa ka qiimo badan in la xuso sida loo xaliyay. Oo aheyd wadajirnimo, dulqaad iyo u dagaalan danta guud inaan nagala dhaawacin. Si suuqa lacag bariga naloogu ciriiriyo, kuwo ayaa nagala hormarey lacag aruurtii. Halka kuwa kale ay jinsinimadeena somalinimo yaseyn, oo noogu hanjabeen inaan wax qabsan karin. Kuwo kalana waxey yiraahdeen waan idin heshiinsiin doonaa, markaad lacagta qeybinteed ku dagaashaan. Wax la dhibsado ficilka wuu ahaa, balse anagaa is dhigney meeshaa, ayaan aaminsanahey. Sida keliya oo arigtidaa qaldan lagu badali karnaana, waa anagoo ficil fiican la nimaadno. Waana taa taan u dagaaltameyney inaysan marnana naga dhaawacin. Odeynimada, deganaanshaha iyo hormuudka wanaagsan ee Ahmed Cawad, Jaamac Yuusuf iyo masaajidka Towfiiq howshan ka muujiyeen, waa tan aan maantey guusheeda ku faantameyno.
Markii la gaarey maalintii ay howshaa dhici laheyd, oo aheyd maalin sabti ah. Maalin nasiino, oo dadka intiisa badan hurdada ku yara daahaan, ayaa subaxii aroortii xafiiska Xanaano aan wada dhoobneyn si howsha loo bilaabo.
Waxaa lagu bilaabey la wareega koombooyinka. Oo loo sameeyay nidaam ah in meelaha dadku ku badan yihiin kooxo kooxo koombooyinka lagula wareego. Sadex teendho ayaan u dhisney cuntada si loogu gado. Ilaah kheyr ha ka siiyo guryo badan baa cuntooyin kala gedisan soo diyaariyay. Darawalo aan daaleyn ayaa diyaar ahaa maalintaa, oo waxii meel looga baahdo meel ka soo qaada, oo meel kale geeya. Warbaahintu waxey ku wareegaan meelaha ay wax ka dhacayaan oo dadka ayay wareysi iyo dhiira gelin ku hayaan. Howsha gobolooyinka xafiiska ayaa laga hagayay, oo waxey u baahan yihiin iyo meeshey wax u marayaan lagala socdey. Waxyaalihii iigu farxada badneyd maalintaa waxey aheyd iney noo yimaadeen dad aan somalida soo dhex gelin maalintaa, oo wardoon ahaa. Oo markii dambana iyagoo qanacsan koombooyinkii la wareegayeen.
Dareenka iyo shacuurta iyo farxada maalintaa naga muuqatey, waxey na hilmaansiisey daalkii iyo walwalkii iyo hurdo la`aantii mudo lagu jirey. Howl aan weligeed la qaban, xirfad weyna loo laheyn baa laysku dayay. Nabad iyo wanaag bey noogu bilaamatey, nabad iyo wanaagna iyo guulna Ilaah waa noogu dhameeyay. Labadii ulajeedo ay howshan ku saleysneed (caawin iyo wada jirniimo) waxaan dareemayaa inaan wada gaarney.
Markii howshii lacag aruurinta soo dhamaatey. Ayaa si wadajir ah masaajidkuna ka mid yahey loo doortey gudi dhowr qof ka kooban oo mas`uul looga dhigey in ay soo baaraan meelaha ay abaartu ka jirto iyo meelaha uu dhibku ugu badan yahey. Labo maalmood ka dib gudigaa waxay soo bandhigeen xogtii ay soo aruurinyeen iyo meelihii ay la xariireen. Wada hadal ka dib waxa la go`aansadey in lacagtaa dhamaanteed loo wada diro gudiga qaranka ee abaaraha. Iyagaa dhibka nooga dhow, nooga aqoon badan. Gudigii abaaraha waan la xiriirney dhowr jeer. Waa la war galiyay in sadaqadan ay jaaliyada soo direyso ay ka timid soomaali weyn oo dhan. Aana dooneyno in ay gaarto umada dhibaateysan. Codsigaa weyna naga ajiibeen. Lacagtiina waa dirney. Waxaan Ilaah uga baryeynaa in intii sadaqeysatey iyo intii ka shaqeyseyba Ilaah ajar iyo xasanaad aan dhamaan ka siiyo. Ilaahna u barakeeyo intii loo direy sadaqadaa.
Xaqiiqda ayaa ah, iyadoo guushan la wada leeyahey, ayaa hadana la kala howl badnaa. Matoorkii howshan oo bilow ilaa dhamaad la socdey. Habeen iyo maalinna waqti iyo enerji badan u hurey ayaa mudan in dadaalkooda lagu qiimeeyo. Waxey ahaayeen Maxamed Saadiq oo ah hogaamiyaha Somali Peace Award, oo ah haya’dii gudoonsiiyay Dr. Osman Mohamud Dufle biladda abaal marinta Nabadda iyo Horumarka Soomaaliyeed 2016. Iyo Ahmed Xanaano oo ah hogaamiyaha Xanaano. Waa ururka howshan suurta geliyay. Waana urur mudo gaaban soo jirey, hadana shao weyn qabtey. Waxey ka shaqeeyaan caawinta agoomaha. Oo caruur ka badan 100 ayay iskuulaad iyo caafimaad ugu deeqeen.
Waxaa mar kale iyo mar 3aad iyo inka badanba uga mahad naqayaa intii howshan ka qeyb qaatey. Midnimo ka shaqeyn ayaan u wada istaagey. Guusheedna wada gaarney.
In wada shaqeyn ay ka xoog badan tahey kana sumcad weyn tahey, keli socod.
In ka hortag uu ka fiican yahey dayactir. Waa inaan awood u leenahney in aan ka hor tegi karno dhib aan ogsoon nahney inuu imanayo, inta aan dayactir ka shaqeyn laheyn.
Waa inaan awood u leenahney inaan dadkeena iyo duunyadeena, bad-baadsan karno.
Hadaan nahney jaaliyada Norwey, waa in aan hada bilownaa, ka tabaabusheysigaa dhibkaa.
Ururada samafalka ee Norwegianka markaan u diidney iney maamulka lacagta yeeshaan, waxey nagu caadiyeen koombooyinkoodii. Oo sababtey inaan si deg deg ah koombooyin ku gadano. Qaar kalana meelo kale ka barino. Baryadaa iyo ficilkaa waa ka sharaf weyn nahney.
Waa in degaan kastaa uu heystaa koombooyin u diyaar ah. Oo ay ku howl geli karaan markey masiibo timaado. Calaa koombo waxey joogtaa 120.kr.
Waa in uu xiriir fiican oo joogta ah uu ka dhaxeeyaa masaajidada iyo shacabka ay matalayaan.
Meesha bulsho lagu bahdili karo, laguna qurxin karo waa warbaahinta. Warhaabinteenu waa ineey hormuudka bulshada noqdaan. Waa ineey ku baarugsan yihiin oo ay la socdaan dhaq-dhaqaaqa iyo wax qabadka bulshada. Oo aysan sugan in la soo kiciyo.
Qaar ka  mid ah sawiradii la qaadey inta ay howshan socotey.
Guusha reer Norwey iyo waxa laga baran karo | Wardoon says:
[…] HALKAN KAGAL SHEEKADAN OO DHAMAYSTIRAN […]